फिल्म निर्देशक ओलीलाई के–के ‘आरोप’ लागे ? - Dainik Nepal
फिल्म निर्देशक ओलीलाई के–के ‘आरोप’ लागे ?
दैनिक नेपाल २०७२ पुष २ गते ९:०३
काठमाडौं । फिल्म निर्देशक अमर ओलीले थुप्रै फिल्म र म्युजिक भिडियोहरू निर्देशन गरेका छन् । निर्देशनका क्रममा उनका तितामिठा दुबै अनुभव अहिले पनि ताजै छन् । फिल्मको निर्देशन गर्दा होस् वा म्युजिक भिडियो निर्देशन गर्दा, उत्तिकै मिहिनेत गर्नुपर्ने उनको भनाइ र बुझाइ छ ।
‘निर्देशन गर्नु शिक्षकको भूमिका निभाउनु सरह हो । निर्देशनमा लडाइँको कमाण्डरको भूमिका निभाउनु जस्तैजस्तै पनि हो’, उनले भने, ‘निर्देशकले राम्रोसँग कलाकारलाई काम गराउन सकेन भने पूरै फिल्म नराम्रो बन्न सक्छ । प्राविधिकदेखि शूटिङ्स्थलमा चिया खाएकोसम्म ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।’
सानो विषयले पनि फिल्मलाई उत्कृष्ठ बनाउँछ भन्ने मान्यता निर्देशक ओलीको छ । उनले सधैँ आफ्ना फिल्म निर्माण गर्दा प्राविधिक होस् वा अभिनय सबैको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने गरेको बताउँछन् ।
निर्देशक ओलीले आफ्नो पछिल्लो फिल्म ‘आरोप’को शूटिङ पूरा गरेका छन् । अधिकांश शूटिङ नवलपरासीमा गरेका ओलीले सबै कलाकार र प्राविधिकहरूले पूर्णरुपमा सहयोग गरेको सुनाए । ‘फिल्म बनाउँदा वा निर्देशन गर्दा टिमवर्कको अति आवश्यक्ता हुन्छ’, उनले भने, ‘सबैको चित्त बुझाउन सक्नु त्यो निर्देशकीय क्षमता पनि हो ।’
नवलपरासी जिल्लामा भएको शूटिङका बेला ‘आरोप’की नायिका सञ्चिता लुइँटेल र नायिक किशोर खतिवडालगायतको समूहले अत्यन्तै सहयोग गरेको ओलीको स्मरण छ ।
अभिनेता सुशील पोखरेल, रस्मी भट्ट, प्रेम खड्का, नव नायिका ऋच्चा थापा र दीपिका ढकाल, उद्धव गिरी, राजु रावत, दिनेश पाठक, राजन गहतराज, विजय सापकोटा तथा बालकलाकार गौरव सापकोटा, दीपशन पाठक र अश्लेषलगायतले आ–आफ्नो भूमिकामा राम्रो अभिनय गरेको उनको भनाइ छ ।
‘आरोप’का निर्माता दिनेश पाठक र विजय सापकोटा हुन् । फिल्मको निर्माण राजु रावत र राजन गहतराजले गरेका हुन् । ‘आरोप’मा संगीत विकाश र गणेश चौधरीले दिएका छन् । गीतका शब्द शंकर अधिकारी ‘घायल’का हुन् । गीतहरूमा स्वर राजेश पायल राई, नित्या शिवा र मनीषा पोखरेलले दिएका छन् ।
द्वन्द्व सानुकुमार महर्जनको रहेको ‘आरोप’को छायाँकन वीरेन्द्र भट्टले गरेका हुन् । त्यसै गरी फिल्ममा नृत्य निर्देशन कमल राईको छ । चलचित्रमा सहनिर्देशन सुदीप कुँवर र उत्तम अधिकारीले गरेका हुन् ।
प्राविधिक कार्यमा अन्तिम चरणमा रहेको ‘आरोप’लाई उपयुक्त समयमा रिलिज गर्ने तयारी गरिएको ओलीको भनाइ छ । ‘फिल्मको सबै प्राविधिक काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, निर्देशक ओलीले भने, ‘यो सबै कार्य सक्किनेवित्तिकै सल्लाह गरेर रिलिजको मिति तोक्ने छौँ ।’